आखीर म को हुँ ? | Umesh's Blog
मेरो हंशले ठाउँ छाड्यो । यो बजियालाई मेरो नाम कसरी थाहा भएछ । पक्का पनि यो मलाई मार्नलाई आएको हो जस्तो लाग्यो । सिधै तँ भन्यो । अहंकार मा पनि अलि अलि चोट लाग्यो । बोलौँ भने म यमराज हो तँलाई लैजान आएको भन्देला । नबोलौँ न त भने पनि बोलायो । अब के गर्ने के नगर्ने । अलमल्ल परेँ ।
डराउँदै डराउँदै , “हजुर” । मेरो अनुहार तातो भएको थियो । जीवनको यो दृष्य, कतै क्यामेराले कैद गरेको भए, हेर्न लायक हुन्थ्यो होला । तर त्यो मध्यरातमा क्यामेरा कहाँबाट हुनु । म पनि कस्तो बुद्धु होला । यतिका राती एक्लै किन हिँडेछु जस्तो पनि लाग्यो ।
आज मरिनै भैयो भन्ने लागीसकेको थियो ।
म ठिङ्ग उभीएँ ।
फेरी उ आफैँ बोल्यो । “नडरा म, तलाईँ केही गर्दीन । ”
आहा । बल्ल आनन्द भयो । बाँचियो जस्तो लाग्यो । धन्न । कतै भगवान् छन् कि क्याहो जस्तो पनि भयो । धन्न केहि गर्दीन भन्यो । अलि अलि सास पलाएर आयो ।
“म पनि उमेश नै हुँ अर्थात् तैँ हु । तर तँ मलाई चिन्दैनस् ”
उसको यो वाक्यले त मेरो अलि अलि आउँदै गरेको शास पनि रोकिएला जस्तो भयो । म पनि उमेश हुँ भन्छ । राम राम । मनमनै रामको नाम जपिहालेँ । साथीभाईहरुसँग कहिले काहि दिने गफ भन्दा निकै डरलाग्दो हुँदोरैछ यो डर भन्ने कुरा पनि । बिहोस पो भएँकि भनेर आफैँलाई चिमोटे मैले । धन्न होस मै रैछु ।
बोल्नलाई शब्दै फुटेको थिएन । फेरी उ आफैँ बोल्यो ।
“म तैँ हुँ । सँधै सँगै छु । तर तँ मलाई चिन्दैनस् । तैले मलाई आज पहिलो पटक देखिरा छस् ।” उ बोलीरहेको थियो ।
के म त्यो हुँ त ? धत् । म उ कसरी हुन सक्छु ? त्यति कालो पनि त छैन म । अनि मेरा हात त दुईवटा मात्र छन् । उस्को जस्तो दारी पनि छैन । गालामा हात लगेँ । बिहान भर्खर दाह्री काटेको थिएँ । चिल्लो गाला महशुस भयो ।
के भन्दैछ यो ? उदेक लाग्यो । डर ले सिमा नाघेकै थियो । अब अचम्म पनि लाग्दै थियो । डराचम्म । यस्तै भईरहेको थियो । “उ, बोल्दै गयो । तलाई मान्छेले जे देख्छन् त्यो तँ हैनस् । वास्तविक तँ त म हुँ ।”
अब उसको स्वरुप परिवर्तन हुँदै थियो । दुईवटा हात भए । दाह्री पनि सबै मठुरीए मैले देख्दा देख्दै । उसको त्यो कालो वर्ण सेतो सेतो भयो । ठ्याक्कै म जतिकै । हातहरु कता गए मैले देखिन । विस्तारै विस्तारै अर्को म जस्तै ठ्याक्कै उमेश भयो
मैले मेरो अनुहार ऐनामा हेरिरहेको हो की जस्तो लाग्ने । डिट्टु म जस्तै । अब डर भन्दा पनि बढि अचम्म लागीरहेको थियो । कसरी यो मान्छे म जस्तो भयो । के म त्यो हुँ ? कि म मै हुँ? अब आफैँलाई चिन्न मलाई मुस्कील पर्न थाल्यो । हैन यो सब कसरी भयो ? मलाई एकदमै अचम्म लाग्यो । अबत उसको बोली पनि मेरै जस्तो भयो । म बोलीरा हो की उ बोलीरा हो मैले ठम्म्याउन लाई उसको ओठ तिर हेरेर बुझ्नुपर्ने अवस्था भयो ।
उ बोल्दै गयो । म सुन्दै गएँ । “अब भन्, तँ म हुँ कै हैन ? ”
हैन कसरी भनौँ, म जस्तै छ । हो कसरी भनौ ? म भनेको कहाँ त्यो हुन सक्छ ?
“उस्तै देखीरा छु । तर म को हुँ भन्ने कुरा मलाई नै ठम्याउन गाह्रो भईरा छ । ” मैले विस्तारै भने ।
“तँ पत्या नपत्या । त शरिर होस् । म तेरो आत्म हुँ । ” उसले यसैगरी भन्यो ।
म जस्तै छ । मेरो आत्म रे । कसरी पत्याउनु मैले । अब उ र म बिचमा को म को उ भनेर मलाई पनि चिन्न हम्मे हम्मे पर्दै गईरहेको थियो ।
डर पनि लागीरहेको थियो अनि अचम्म त छँदै छ ।
उ बोल्दै गयो । मैले उसका वाक्यहरु मात्र सुन्न थालेँ ।
“तँ जसलाई म भनिरहेको छस्, त्यो तँ हैन । कुनै हालत मा पनि त्यो तँ हुनै सक्दैनस् । त्यो तेरो शरीरर हो । तलाई मान्छेले चिन्ने आधार हो । मान्छेले जान्ने तँ चै त्यो तेरो शरीर हो । ”
उसले मलाई ज्ञानको पाठ पो पढाउन थाल्यो । अब अघिको डर अलि अलि हराउँदै गयो ।
म पनि सोधौँ कि केहीजस्तो लाग्यो ।
“अनि आखिर म चैँ को हो त ? के मान्छेले चिनेको म म हैन र ? संसार ले जानेको म म हैन भने म को हो त ? ”विस्तारै कुना बाट निस्कीएको आवाज जस्तो आवाज निस्कीयो मेरो मुखबाट ।
“तेरो भ्रम नै तँ होस् । त हुँनुको अहंकार नै तँ होस् । त छस् भन्ने घमण्ड नै त होस् । संसार ले देख्ने तँ त्यस्तै प्रकारको होस् । अब वास्तविक तँ कोहोस् त ? मुख्य कुरा यो हो । वास्तविक तँ कोही पनि हैन, त शुन्यता होस् । तँ भन्ने कुरै छैन । तँ र म भन्नका लागी यहाँ दुईवटा केही पनि छैन । सबै एक हो । न त तँ छस् न त अरु मान्छे ।”
“अनि, तँ को होस् त ? ” मैले पनि सहास बटुलेर सोधेँ ।
“भने त म तेरो आत्म हुँ । हैन हैन यहाँ तेरो मेरो भन्नु भन्दा पनि म समग्रमा शुन्यता हुँ । खाली हुँ । ” सबै कुरा सकिदाँ बाकी के रहन्छ त्यहि हुँ । जस्तो यौटा शिसा भित्र पानि भरिएको छ । पानि पोखीयो । शिसा बाँकि रह्यो । अब त्यो शिसा पनि टुक्रा टुक्रा भयो । सबै टुक्रा टुक्रा भएर सकियो । अब जे बाँकि रह्यो म त्यहि हुँ ।
“अनि, यहाँ किन आएको त ? ” मलाई पनि प्रश्न सोध्न मन लाग्यो । हुनत मैले उसको कुरा एक थोप्पो बुझेको भा त मर्नु । केहि पनि बुझेको थिईन । तै पनि प्रश्न गरेँ ।
“तँलाई बिउँझाउन । मेरो काम तलाई निन्द्रा बाट बिउँझाउनु हो । तेरो असली परिचय दिलाउनु हो । त्यति भए हुन्छ । म त्यहि कामको लागी आएको हुँ । ”
ह्या । के बकवास कुरा गर्न थाल्यो यो । डर भन्दा पनि अब चैँ वाक्क लाग्न थाल्यो । डर पनि कहाँ हराउनु र हराउन त तै पनि यस्का कुरा भने अब बकवास लाग्न थाल्यो ।
“तँ आफुलाई जो भनेर कर्म गर्दैछस् त्यो तेरो तरिका मात्रै गलत छ । अरु सबै ठिकै चलिरा छ । तँैले कर्म गर्नुपर्छ त्यो सहि छ । तैँले प्रेम गर्नुपर्छ, त्यो पनि सहि छ । तैँले धेरै कुरा गर्नु पर्छ सबै कुरा सहि छ, तर गर्नेवाला तँ भएर गरिरा छस् त्यो गलत छ । तलाई लागीराख्या होला कि यो सबै काम म गरिरा छु । म छु र त यो काम हरु भईरा छ नी । हैन त ?”
उसले सासै नफेरी भन्यो । उसको यो कुरामा चैँ मैले तुक भेटेँ । हतार हतार भने । “हो हो । मलाई त्यस्तै लागीरा छ । गर्नेवाला मै हुँ भन्ने लागीराख्या छ । के यो गलत हो त ? त्यसो भा सहि के हो ? ”
उ एकछिन अल्मलीए जस्तो भयो । अनि फेरी बोल्यो ।
“पहिलो कुरा । तँ बाट तँ हट्नु पर्छ । तँ कोही होईनस् । न त तँ कर्ता होस् न त कर्म नै । तँ केही काम गरिराछस् मात्र केका लागी भने तँ सँग यौटा शरिर छ । त्यसका लागी । नभए तेरो कर्म पनि निरर्थक छ । तेरो धर्तिमा आउनुको प्रयोजन ठूलो पनि छ र निस्प्रयोजन पनि छ । जब तँ आफुलाई आफु मान्छस् भने तेरो प्रयोजन ठूलो छ । तर जब तँ र अरुमा भिन्नता हुँदैन । सबै एक हुन्छ , त्यसपछि प्रयोजन भन्ने कुरै हराएर जान्छ । दुईवटा हुँदा पो प्रयोजन भन्ने हुन्छ त । जब ढुङ्गो माटो, जंगल, प्रकृति , प्रेम , नारी, पुरुष, एक अर्को सबै एकै हो भन्ने हुन्छ भने त्यसको के प्रयोजन ? जस्तोः तलाई लाग्छ ढुङ्गाको प्रयोजन छ । किन भने तँ र ढुङ्गा फरक वस्तुहरु हुन् । तर एक पटक विचार गर्, ढुङ्गैमात्र रह्यो अथवा तँ मात्र रहिस् भने त्यसको के प्रयोजन ? एक भनेकै निश्प्रयोजन हुनु हो । दुई हुने वित्तिकै प्रयोजन सुरु हुन्छ । अस्थित्व सुरु हुन्छ । अनि अहंकार को जन्म हुन्छ । ”
अब चैँ उसका यी कुरा हरु कृष्ण ले गीतामा भनेको जस्तै लाग्न थालेको थियो । कतै यो कृष्ण त हैन जस्तो पनि लाग्यो ।अब डर निकै हटेको थियो ।
मैले पनि सोधेँ “के म यहाँ हुनु, कुनै प्रयोजन छैन त ?”
विस्तारै रातो रातो ओठ तन्काउँदै बोल्यो ।
“छ पनि छैन पनि । तैले यहि त बुझ्नु छ । प्रयोजन छ किनभने तैले कर्म गर्नुपर्छ । प्रयोजन छैन किनभने त र म भन्ने कुरै गलत हो । सबै कुरा दुईले जन्माएको हो । तँ यो धर्तिमा हुनु भनेको यौटा अकल्पनिय संयोग हो । मैले तँ भनेको तेरो शरिर र चेतनालाई जोडेर भनेको हो । यौटा शरिर मा चेतनाको विकास भएर यस्तो रुपमा आउनु भनेको यौटा प्रकृतिको बेजोड संयोग हो । अब यसलाई प्रयोजन भन् या त निश्प्रयोजन भन् । हज्जारौँ लाखौँ डिम्ब र शुक्रकिट मध्येबाट कुनै एक संयोग मिलन हुँदा तेरो (तँ र चेतना) को विकास भएको हो । के लाखौँ करोडौँ बाट एक हुनु संयोग हैन होला त ? ”
ल अचम्म छ । यो पनि कन्फ्युज भएजस्तो छ । मलाई नै पो उल्टै सोध्छ त बा । मलाई अझै अचम्म लाग्यो । यसले मलाई के दर्शन पढाएको होला जस्तो पनि लाग्यो ।
“मेरो काम यत्ति मात्रै हो कि तँ जाग् । उठ् । ज्ञान चक्षु उजागर गर् । तेरो परिचय उमेश घिमिरे मात्रै हैन । यो तेरो कसैले दिएको परिचय हो ।”
उसले भन्दै थियो । उ फेरी पुरानै रुपमा फर्क्यो । हातमा तरबार लिएको । कुनै तामिल फील्मको हिरो जस्तै । मलाई अचम्म लाग्यो । अचानक उसले हातको तरबार उठायो । अनि बेजोडले कराउँदै भन्न थाल्यो ।
“उठ् उमेश अब जाग् ।”
अब चैँ यसले मार्ने भयो कि क्या हो जस्तो लाग्यो । बाँच्नु त पर्यो भनेर भाग्न मात्रै के खोजेको थिएँ । उ मेरै अगाढी ठ्याङ्ग उभियो । तरबार लिएर । उसले तरबार उझ्यायो । “नाई, नमार मलाई । ” अचानक म चिच्याउन थालेँ । डरले आँखा चिम्म गरेँ । तर उसले मलाई तरबार ले हानेन ।
विस्तारै आँखा खोलेँ । उ थिएन । हरायो । छेउमा छाम छाम छुमछुम गरेँ । शिरक भेटेँ । ल । म त सापनामा पो रैछु । झल्याँस्स बिउँझिएँ ।
घडि हेरेँ , ९ बज्न लागेछ । धत् अल्छी भैएछ । अफीस जानेबेला भैसक्यो ।
साँच्चैँ म को हुँ ? दाँत माझदा माझ्दै, विचार गर्दैँ गएँ । त्यो सपनाको उमेश ले ठिकै भनेको हो की जस्तो पनि लाग्यो । लाग्यो म उमेश घिमिरे मात्रै चैँ
हैन । सोचेँ । आखिर म को हुँ ? ऐना अगाढी आएर । एकटक हेरेँ । आखीर म को हुँ ? निरुत्तर भएँ ।
Categories: Extra, Thought, Uncategorized
Tags: identity, Life, me